१५ महिनापछि पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव नातिसहित शीतल निवास जाँदै « Pahilo News
१५ महिनापछि पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव नातिसहित शीतल निवास जाँदै
प्रकाशित मिति : 15 January, 2017 1:16 pm
२ माघ । सात वर्ष राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिताएर २०७२ कात्तिक १२ गते औपचारिक रुपमा सो निवास छाडेका गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव करिब १५ महिनापछि शीतल निवास छिर्ने भएका छन् । तर, यस पटक उनी वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग कुनै राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न शीतल निवास जान लागेका होइनन् । भोलि माघ ३ गते पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवका नाति अभिषेक यादवको विवाह समारोहमा सहभागी हुन उनी शीतल निवास छिर्न लागेका हुन् ।
जननेता मदन भण्डारी र गणतन्त्र नेपालकी दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी कान्छी छोरी निशाकुसुमसँग डा. रामवरणका नाति अभिशेकको विवाह समारोह सोमबार शीतल निवासमै हुने भएकाले उनी परिवारको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै नातिको बिहेमा जन्ती बनेर जान लागेका हुन् । पेशाले चिकित्सक निशाकुसुम र अभिषेक बुढानीलकण्ठ स्कुल पढ्दादेखिकै साथी थिए । करिब ७ वर्षदेखिको प्रेम सम्बन्धलाई दुवै परिवार स्वीकारे पछि उनीहरुबीच माघ ३ गते विवाह हुन लागेको हो ।
५१ जना जन्ती
महोत्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सभासद् बनेकी किरण यादव अभिषेककी आमा हुन् । सांसद् किरणले छोराको जन्तीमा ५१ जना सामेल हुने बताइन् । हाल ललितपुरको भैंसेपाटीमा बस्दै आएकी किरणले छोरालाई त्यहीँबाट अन्माएर शीतल निवास लैजाने जानकारी पहिलो न्युज डटकमलाई दिइन् । ‘हाम्रो परिवारमा तडक–भडक हुँदैन,’ घरभरि पाहुना रहेकाले उनीहरुको सम्मान र विवाहको चटारोमा रहेकी यादवले छोटो कुराकानी गर्दै भनिन्, ‘जन्ती ५१ जना मात्रै हुन्छन् । हामीले मैथिली परम्परा अनुसार विवाहको तयारी गरेका छौँ ।’
किरणले पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव अभिभावकका रुपमा शीतल निवास जाने पनि जानकारी दिइन् । ‘उहाँ हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँ पनि नातिको विवाहमा जानु हुनेछ ।’ स्वास्थ्य उपचारपछि धनुषाको सपहीमा बस्दै आएका डा. यादव भोलिको विवाहमा सहभागी हुन राजधानी आएका छन् ।
टीकाटालोमा नगएका यादव विवाहमा जाने
शीतल निवासमा अभिषेक र निशाको टीकाटालो हुँदा डा. यादव उपस्थित थिएनन् । उनीहरुबीच टीकाटालो हुँदा डा.रामवरणका छोरा चन्द्रमोहन र अभिषेकका आमाबाबु उपस्थित थिए । डा.रामवरण भने उपचारका क्रममा अमेरिकामा रहेकाले त्यसबेला उपस्थित हुन नसकेका हुन् ।
हामी नेपालका मधेसी हौँः किरण
गणतन्त्र नेपालका प्रथम र दोस्रो राष्ट्रपति कुटुम्ब सम्बन्धमा जोडिएको प्रसंगसँगै अभिषेककी आमा किरणसँग मधेस र पहाडका दुई परिवारको नाता गाँसिएको छ, के भन्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा किरणले भनिन्– ‘हामी नेपाल देशकै मधेसी हौँ । ३० वर्ष अघिदेखि नै हाम्रो परिवारमा पहाडी र मधेसीबीचको कुटुम्ब सम्बन्ध जोडिएको छ । यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने केही छैन ।’
उनले अहिले मधेस र पहाडबीच विभाजनको रेखा कोर्ने बेला नभएको भन्दै हिमाल, पहाड र तराई अलग गर्ने कुरा आफूहरुले सोच्न पनि नसक्ने बताइन् । ‘सगरमाथा पग्लेर आएको पानीले पहाडको मलिलो माटो बगाएपछि तराई उर्वर बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘भावनात्मक रुपमा पनि हिमाल, पहाड र तराईको सम्बन्ध युग–युगदेखि सुमधुर छ । कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ ?’
किरणले विवाहमा ‘हल्दी’ बारे जानकारी दिइन् । ‘मैथिली परम्पराअनुसार हल्दी गर्नुपर्छ,’ यादवले भनिन् ‘हल्दी गर्छौं, बेलुका नाचगान गर्छौं । तर, तडकभडक भने गर्दैनौँ ।’